Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Rhys Williams Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Ihe omuma nke Rhys Williams gosiputara Eziokwu banyere Nwatakiri Akụkọ ya, Nmalite ndu, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, uru odi na ndu nke onwe.
Na nkenke, anyị na-ewetara gị, akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara n'asụsụ Bekee sitere n'ike mmụọ nsọ Jurgen Klopp si Liverpool
Lifebogger malitere site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị Rhys Williams 'Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ndụ mbido na ịrị elu nke Rhys Williams.
Ee, gị na gị maara o nwere Baby Face - ihe dika Van Dijk na anya na agwa.
N'agbanyeghị nsọpụrụ, anyị hụrụ na ọ bụghị ọtụtụ Fans ahụla otu ụdị nke Rhys Life Story. Anyị akwadebewo ya memoir, naanị n'ihi na ị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Rhys Williams Nwatakiri Akụkọ nke:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha - Ihu nwa. A mụrụ Rhys Williams na ụbọchị 3 nke February 2001 n'obodo Preston na England. Amụrụ ya nne na nna ọ ka na-ekpughe.
Igwe kpakpando isii na 6 na anọ dị afọ mbụ ya na Priston. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ hụrụ football n'anya - site na nwata.
Dị ka ọtụtụ talent talent, Rys maara na ọ na-egbupụrụ ya bọọlụ bọọlụ. N'ihi ya, obodo Bekee nke Preston nyeere ya aka ịrụ ọrụ.
Ndị na-agba ọsọ ogologo toro na Preston na UK.
Rhys Williams Ezinụlọ:
Njem ihu nwa nwa ka ọ bụrụ kpakpando kachasị elu anaghị eme n'okporo ụzọ owu. O nwere nkwado nke nne na nna ya n'etiti.
N'ụzọ kwesịrị ịja mma, ha butere obi ụtọ ya ụzọ. Ọzọkwa, mama na papa ha dị njikere inye ihe ọ bụla nwa ha nwoke chọrọ.
Have hụrụla?… Aha mbụ starlet mụrụ kpakpando na-ada Welsh. Nke ahụ nwere ike ịbụ ezigbo ntụzi aka ebe mgbọrọgwụ ezinụlọ ya malitere.
Ebe ọ bụ na ọ dịla mfe ịmegharị Wales na Bekee, ọ ga-adị mma iburu n'uche na Williams bụ kpakpando ndị Britain.
Rhys Williams Football Akụkọ:
Site na nwata ahụ bụ afọ 10, nne na nna ya nyeere ya aka ịbanye na agụmakwụkwọ Liverpool. Ọ bụ ụlọ ọgbakọ ọ hụrụ n'anya. N'ụzọ na-akpali mmasị, ịbụ akụkụ nke usoro ntorobịa Red mere ka o nwee nzube.
Lee Rhys Williams ka ọ bịanyere aka na ya na Liverpool.
N'etiti ịrị elu ya na ọkwa klọb, Williams dekọtara ọganihu na nhịpụ na ókè maka ụlọ ọgbakọ na Mba.
Nwere ike ịhụ onye na-agbachitere 6 ụkwụ 4 sentimita asatọ na-egosi maka Lions Young n'akụkụ Curtis Jones na Bukayo Saka?
Ọ bụ otu n'ime ụmụ ọdụm.
Rhys Williams Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'elu ọnụ ọgụgụ ntorobịa ya na-acha uhie uhie, Baby Face meriri iko ndị ntorobịa FA na 2019. Ihe ngosi a dị mkpa n'ihi na ọ bụ oge mbụ ndị Reds meriri asọmpi ahụ kemgbe 2007.
Mgbe nke ahụ gasịrị, e zigara onye na-eto eto ngwa ngwa na mgbazinye ego na Kidderminster Harriers na-abụghị ndị otu na mbinye ego na August 2019.
Hụ onye nyeere ndị Reds aka inweta iko ndị ntorobịa FA.
Mgbe Ihe siri ike:
Okwesiri ighota na o nwere oge siri ike na Aggborough Stadium. N'oge ahụ ndị egwuregwu mmegide jiri ike ha dị elu karịa ya ike.
Ọzọkwa, Williams riri isi mgbaka, ọbụnakwa gbajiri imi. Agbanyeghị, ọ nwetara ike site na ahụmịhe ahụ wee bụrụ onye ọkpụkpọ nwere ọkaibe nwere nnukwu usoro.
Rhys Williams Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Mgbe etiti laghachiri na klọb nne na nna ya, ha nyere ya nkwekọrịta na ohere ndị otu mbụ.
Onyinye a enweghị njikọ na eziokwu ahụ Fabinho na Van Dijk nwere mmerụ ahụ. N'iji ohere ahụ, Williams masịrị ya na EFL na Champions League nke izizi ya.
Hụ onye bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara ya na ndị Reds na Septemba.
Ihe ịga nke ọma nke Center Center bịara n'oge ọhụụ nke abụọ ya. Ọ batara dị ka nkeji oge 30th maka Fabinho merụrụ ahụ ma nyere Liverpool aka ịdekọ mmeri 2-0 na FC Midtjylland.
Ihe William mere n'egwuregwu ahụ wetara ya otuto dị ukwuu. Ka a sịkwa ihe mere mgbe ọ gwara ndị nta akụkọ okwu ọ kwuru na: 'Ọ bụ abalị kachasị mma ná ndụ m'.
Njem William na bọl elu elu amalitela ugbu a, nke kacha mma ka ga-abịara ya. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ Rhys Williams Girlfriend na nwunye ga-abụ?
Baby Face abụghị otu. Ọ lụbeghịkwa di. Naanị ihe ọ nwere bụ ọmarịcha enyi nwanyị. Aha ya bụ Thea Spencer.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ịhụnanyabirds ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ogologo ma nwee otu agba akpụkpọ ahụ. Nke ahụ ọ́ dịghị mma? oh!… odi ka Thea Spencer di toro di ya karie.
Rhys Williams na enyi ya nwanyị, Thea Spencer.
Ilegharị anya na ibe Instagram nke Instagram na-ekpughe na ha nwere atụmatụ maka ọdịnihu ma na-ejekwa ozi maka ebumnuche ndị di na nwunye.
Ọ na-atọ ndị Fans ụtọ na Spencer nwere otu n'ime ọmarịcha ụmụ agbọghọ mara mma na njikọ. Ha enweghị ike ichere ịhụ ebe ụgbọ mmiri ịhụnanya ha na-akwụsị.
Ndụ nwa ihu na ịrị elu na football agaghị ekwe omume na-enweghị ụfọdụ ndị pụrụ iche na ndụ ya.
Ha bụ ezinụlọ ya. N'ebe a, anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị nne na nna na ụmụnne Rhys Williams. Anyị ga-emekwa ka eziokwu banyere ndị ikwu ya nọrọ ebe a.
Banyere Rhys Williams Ndị nne na nna:
Ebe etiti na-akwado nna na mama na-arụsi ọrụ ike n'azụ ihe nkiri iji hụ na nwa ha nwoke ghọrọ ezigbo ụlọ - ọ ka mma karịa Jamaal Lascelles - n’oge na-adịghị anya.
Agbanyeghị, Rhys egosighi njirimara ha ma ọ bụ kwupụta mmekọrịta dị n'etiti ha.
N'agbanyeghị nke ahụ, o doro anya na ha rụrụ nnukwu ọrụ n'ịzụlite ya. Mama na nna Williams ga-enwe afọ ojuju maka ihe ịga nke ọma ya na meteoric. Olileanya, ha agaghị akwụsị akwụsị ibute ọdịmma ya kasịnụ.
Banyere Rhys Williams ibmụnne na ndị ikwu:
Site na nne na nna ya, amabeghị ma o nwere ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị. Ọzọkwa, a gaghị eme ka ndekọ banyere nne na nna ya na nna nna ya pụta ìhè.
Ọ chọpụtabeghịkwa nwanne nne ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne nne ya na ụmụ nwanne ya nwoke.
E nwere nanị kpakpando ole na ole maara otú ha ga-esi mee ka oké ọchịchọ nwee echiche ziri ezi. Williams bụ otu n’ime ha. O doro anya na ọ nwere otu n'ime ihu ọchị kachasị mma na football. Ọzọkwa, o nwere nnukwu nkà mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Nakwa na ederede onwe gị, Rhys bụ onye na-ege ntị nke na-anaghị ekwu ọtụtụ okwu. Ọzọkwa, o nwere ezi uche. N'ezie, Fans anaghị akwụsị inye ihe Na-eti mkpu na Rhys Williams na redio mpaghara na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ihi na onye ya na-adịkarị obere ma na-adọrọ mmasị.
N'ikpeazụ, na ndụ onwe ya, 6 ụkwụ na 4 sentimita asatọ n'etiti etiti bụ onye echebere. Rhys enyeghị ihe ngosi maka ọdịmma ya na ntụrụndụ ya.
Bọchị ndị a, ọ na-eme ka ihu ya sie ike ka ndị fans wee ghara ịkọwahie nwa ya na-achọ onye na-agbachitere ya.
Ndụ Rhys Williams:
N'agbanyeghi na anyi choro ighota otutu uzo nwa anyi nwoke si eme na ego ya, anyi enweghi ike inwe ezigbo ihe. A na-enyocha akụ ya ugbu a dị ka nke Disemba 2020. Ọzọkwa, Liverpool ekpughereghị ndị ọha na eze ego ya.
Agbanyeghị, anyị nwere ike ịkọ na ọ na-akpata £ 226,868 kwa afọ. Na mkpokọta ya, Williams bụ mgbanwe, mmepe nke na-ahapụ ndị nwere otu nhọrọ. Ọ bụ echiche ya na ọ naghị eche banyere ụgbọ ala dị oke ọnụ, nnukwu ụlọ wdg na - ọ dịkarịa ala ugbu a.
Eziokwu Rhys Williams:
Icheta akụkọ nwata na akụkọ ndụ, ebe a bụ eziokwu amachaghị banyere ya.
Nweta ego na Pound (£).
Kwa Afọ: £ 226,868.
Ọnwa kwa: £ 18,890.
Kwa Izu: £ 4,353.
Kwa :bọchị: £ 622
Kwa elekere: £ 26.
Nkeji nkeji: £ 0.43
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Rhys Williams ' Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ndị na-agba ụkwụ na-ekwukarị ihe gbasara okwukwe n'ihe ọha. N’ihi ya, o siri ike ịmata ma hà bụ ndị kwere ekwe ma ọ bụ na ha abụghị. Rhys Williams ga-abụrịrị onye kwere ekwe. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ikwupụta n'ụzọ doro anya otu okpukpe ọ na-eme.
Eziokwu # 3 - Elu Eziokwu:
Banyere oge 2020/2021, Rhys Williams bụ onye kachasị egwu Liverpool. N’akụkụ Joël Matip, ha abụọ tụrụ ogologo 195 mita. Virgil na Alisson Becker bya abia l'ọkpa lanụ.
Eziokwu # 3 - Banyere profaịlụ ya:
Dị ka Chibuike Nwokocha, Rhys nwere akara ngosi FIFA. Ọzọkwa, o nwere ikike nke 74. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-egosi na ọ dị mkpa ka ọ tinye ọnụego ọrụ nchebe iji bulie ihe ya elu. Olileanya, ọkwa ga-akawanye mma ka ọ na-apụtawanye.
Olileanya, ọ na-arụsi ọrụ ike iji meziwanye.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ Rhys Williams nke nwata. Otú o si pụọ Abụghị Njikọ na Njikọ Njikọ bụ ihe mmụta na-akpali akpali nke na-egosi na ọrụ ebube na-eme mgbe nkwadobe na-ezute ohere.
N'ezie, anyị enweghị ike ịja mma mana ịja ndị nne na nna Midfielder maka nkwado ha na ọrụ ya n'okwu na omume. Ọ tolitere site na ịhụnanya ezinụlọ ya, nke kwekọrọ na ịmakụ ha na ndụ ha na-akpali ya.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inweta akụkọ bọọlụ na izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Fans, biko jikọtara anyị maka ndị ọzọ Ndị na-agba bọọlụ Bekee.
Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru. N'aka nke ọzọ, gwa anyị ihe ị chere banyere ya na ngalaba nkọwa. N'ikpeazụ, iji belata uto ngwa ngwa nke Rhys Williams 'Bio, jiri okpokoro Wiki anyị.
Aha zuru ezu: Rhys Williams kwuru.
aha otutu: Ihu nwa.
Ụbọchị ọmụmụ: Daybọchị 3 nke Febụwarị 2001.
Ebe amụrụ onye: obodo Preston dị na England.
Ogo n'ogo: 6 Ugbo, 4 Inches.
Elu na Cm: Udo 195 Cm.
Nwa nwanyi: Thea Spencer na-ekwu okwu.
Ihe omume: Isoro ndị enyi gị na-egwu egwu ma na-egwu egwuregwu vidio.